Ukupholisa uhlelo lokugcina amandla Abahlinzeki kanye Nefekthri - Ukupholisa uhlelo lwase-China lokugcina Amandla Abakhi
I-BlackShields EC series air conditioner top idizayinelwe njengesixazululo sokulawula isimo sezulu sohlelo lokugcina amandla ebhethri(BESS). Uma kucatshangelwa ngesicelo sokulawula ukushisa kwebhethri kanye nesakhiwo sesitsha sokugcina amandla, i-air conditioner iklanyelwe njengesixazululo esinokwethenjelwa nesisebenzayo sokulawula isimo sezulu esinesakhiwo esiphezulu esiphezulu, ukugeleza komoya okukhulu kanye nokunikezwa komoya okuvela phezulu kwesitsha.
Iyunithi yokupholisa uketshezi lwe-BlackShields MC iyi-water chiller edizayinelwe ukulawula isimo sezulu sesistimu yokugcina amandla ebhethri. Ngomklamo we-mono-block, isakhiwo esihlangene, i-outlet ephezulu, eduze nomthombo wokushisa, ivolumu yokushisa ethize ephezulu, umsindo ophansi nokuphendula okusheshayo, iyunithi yokupholisa uketshezi ingaba yisisombululo sokupholisa esisebenza kahle nesithembekile se-BESS.
I-BlackShields EC yochungechunge lwe-monoblock air conditioner yakhelwe njengesixazululo sokulawula isimo sezulu sohlelo lokugcina amandla. Uma kucatshangelwa ngesicelo sokulawula ukushisa kwebhethri kanye nesakhiwo sesitsha sokugcina amandla, i-air conditioner iklanyelwe njengesixazululo esinokwethenjelwa nesisebenzayo sokulawula isimo sezulu ngesakhiwo se-monoblock, ukugeleza komoya okukhulu kanye nokunikezwa komoya okuphezulu.